सावधान ! बिहान भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सावधान ! बिहान भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती
डिसी नेपाल , ६ श्रावण २०७५
काठमाडौं । भनिन्छ बिहानले दिनको संकेत गर्द। हामीले बिहानको समयमा गरिने क्रियाकलापले त्यसको असर दिनभर पर्छ। हामीले बिहान राम्रो काम गरौँ भने दिनभरको समयमा उर्जा प्राप्त हुन्छ। यदी हामीले बिहानै काम राम्रो गरेनौँ भने दिनभर पनि हाम्रो मनस्थितमा त्यसको असर पर्ने गर्दछ ।